दीपाको ओलीलाई खुलापत्र : ‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने आज सिमाना मिचिँदा किन मौन प्रधानमन्त्री ज्यू? « Swadesh Nepal
दीपाको ओलीलाई खुलापत्र : ‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने आज सिमाना मिचिँदा किन मौन प्रधानमन्त्री ज्यू?
मलाई pm बनाइ देउ, मन्त्री बनाइ देउ, मेरो छोरालाई डाक्टर पढाइ देउ, नातिलाई ca बनाई देउ भन्दै भारतीय नेता समक्ष भन्न सके जसरी “सिमाना नमिच “ भन्न तपाईहरुले कहिले सिक्ने ? सेनालाई ब्यारेकमा राखेर पुलिसलाई सिमामा खटाउने ? स्वाधीनतालाई कुटनीतिले नभई राजनीतिले कहिलेसम्म चलाउने ?
उसको सिमाना बचाउन हामी नै लड्नु पर्ने, अनि उस्ले यता हामीलाई हेपेर दादागिरी देखाउँदा चैँ तपाईको कानलाई किन कानाबन्धि लाग्यो? कि भनिदिनुस् हाम्रो आर्मीको काम भनेको सडक बनाउने, शिवरात्रीमा टुंडिखेलमा खेला देखाऊने , राष्ट्रपतिको bag बोक्ने मात्र हो , सिमामा त PUBG को आर्मी खटाउनुस् भनेर..
-(दिपा सिम्खडाको फेसबुकबाट)